म बोल्दा आँफै चिप्लिएँ – गितामणी पाण्डे – ebaglung.com
२०७५ जेष्ठ २५, शुक्रबार ०३:११	Top News, अन्य समाचार, विविध
राजा बगर, युएई, २०७५ जेठ २५ (७ जुन, २०१८) । गत सोमबार युएईको अबुधाबी स्थित नेपाली दुताबासले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गितामणी पाण्डेले आफु बोल्ने क्रममा चिफ्लिएको बताएका छन् ।
नेपाली दुताबास अबुधाबीमा गत सोमबार भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी वैलफेयर सोसाईटीका अध्यक्ष तथा पाल्पाली समाज युएईका संस्थापक र पत्रकार महासंघ युएईका साधारण सदस्य गितामणी पाण्डेले मैले ५०% हुण्डी गर्छु र अन्य साथीहरुलाई सहयोग गर्छु भन्ने यथार्थ भनाईले अहिले युएईको माहौल तातेको छ।
एक अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका अनुसार पत्रकार महासंघले निज पाण्डेलाई कारबाही गरि साधारण सदस्य पनि नरहने गरि निष्कासन गरेको बताइएको छ। पत्रकार महासंघ युएई शाखाले पनि निज पाण्डेलाई संस्थाको विधान विपरित काम गरेको भन्दै कारबाहीको लागि महासघको केन्द्रीय कार्यलयमा सिफारिस गरिएको महासंघ युएई शाखाका सचिब मेघराज सापकोटाले बताएका छन|
यस बिषसमा स्वयं गितामणी पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी यस्तो छ-
दुताबासमा राखेको तपाईको भनाईमा म ५०% हुण्डी गर्छु र हुण्डी गर्नै लाई सहयोग पनि गर्छु भनेर अभिब्यक्ती दिनु भएको छ। कति बर्ष देखि हुण्डी गर्नु भएको छ?
* सबैभन्दा पहिला मैले हुण्डी गर्छु भन्दा पनि युएईमा रहेका समाजसेबी,पत्रकार या अन्य मानिसहरुले ५०% ले हुण्डी गरिरहेका छन। कस्ले के गर्यो कति गर्यौ भन्दा पनि जस्ले जे गरेको छ यो गरेको छु र गरेको छैन भनेर स्पस्ट हुनु पर्यौ। यदि गितामणी पाण्डेले हुण्डी गरेको प्रमाण कसैले देखाउन सकोस म जस्तो सजाय भोग्न पनि तयार छु । २०१६ देखिका रेमिट्यान्स गरेका प्रमाणहरु म सित सुरक्षित छन। र मैले बोलेका कुराहरुलाई लिएर म सम्बन्धित संस्थाहरुले कारबाही गर्छु भन्ने बिषय आफ्नो ठाउमा छ ।
लुम्बिनी बेलफेयर सोसाइटीको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमै रहदै गर्दा आज ५ वटा जिल्लाले मानेर अध्यक्ष हुनुभएको पक्कै हो । नेपाल पत्रकार महासंघ युएई शाखाको पनि सदस्य हुनुहुन्छ अनि पाल्पाली समाजको सँस्थापक पनि । हिजो सम्म हुन्डिको कारोबार बन्द गरौ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै हिड्ने तपाईं पत्रकारले राजदुतावास कै कार्यालयमा म पनि हुण्डीमा ५० प्रतिशत रकम पठाउछु भन्दै गर्दा तपाइलाई नेपाल पत्रकार महासंग युएईले कारबाही गरेको हो या हैन ? सत्य तथ्य बताईदिनु होला ? यदि कारबाही गरेको हो भने तपाईं कस्तो कारबाही मा पर्नु भो ?
* कारबाहीमा पर्नु र नपर्नु ठुलो कुरा होइन। एउटा नियम र प्राबधान पनि हो। नियम सबैले मान्नु पर्छ। मैले गलत बोलेको छैन। बिदेशमा काम गर्नै कामदारहरु सबैले हुण्डी गर्नु हुदैन। बिदेश पठाएको रेमिट्यान्सले नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ एयरपोर्ट जस्ता बिभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नै क्षेत्रमा सहुलियता प्रदान गरोस। त्यो अनलाइनमा छापिएको समचार केहि गलत छ मैले भन्न खोजेको बिदेशबाट रैमिट्यान्स पठाएका कामदारहरुले हरेक क्षेत्रमा सुबिधा पाउन या उक्त अरबौ रुपया देश बिकासमा बिना भस्ट्रचार खर्च होस भन्न खोजेको थिए थोरै म चिफ्लिए।
युएईमा लामो समयको अनुभव र सक्रिय समाजसेबी पनि हुनु हुन्छ धेरै नेपालीको उद्दारमा दौडिएको देखेका छौ ,युएईको हुण्डी कस्तो छ छोटकरिमा बताईदिनुस न?
* युएईमा हुण्डी छ कि छैन भन्दा पनि यो समयको पाबन्दी हो। केहि बर्ष अगाडी यहा जताततै बैकहरु थिएनन र बाध्य भएर नेपाल पैसा पठाउने माध्यम नै हुण्डी थियो । यसलाई अन्यथा लिनु हुदैन। आजकल जताततै पैसा पठाउने माध्यमहरु खुलेका छन अब कसैले यस्तो ग़ैरक़ानूनि कारोबार गर्नु हुदैन। मैले समाजसेवाको रुपमा लामो समय देखि काम गरिरहदा मलाई के अनुभव हुन्छ भने म सामान्य अबस्थाको मान्छे हु । सामाजिक सेवामा धेरै साथिहरु सित सम्पर्क गर्नै क्षमता म सित छ । कस्ले के गर्यौ भनेर अरुको पछि पर्नु भन्दा सबैको आत्मा देखि सकरात्मक सोचको बिकास हुन जरुरि छ। आम नागरिकहरुको सकरात्मक सोच नै देश बिकासको पहिलो माध्यम पनि हो ।
सरकारले हुन्डि रोक्न के गर्नु पर्ला?
* तपाईले गरेको प्रश्न निकै सराहनीय छ । नेपाल सरकारले हुण्डी रोक्नको लागि जस्तै कुनै पनि कामदार बिदेश आउदा उसको अनिबार्य रुपमा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त बैक एकाउन्ट होस। दोश्रो- नेपाल सरकारले हरेक कामदारको आइडी कार्ड बनाउनु पर्छ। कुनै पनि ब्यक्ति बिदेश आईसकेपछि पैसा पठाउने माध्यम त्यहि कार्ड बनोस । त्यहि कार्डले बैदेशिक दुताबास समक्ष समेत काम गर्नै बाताबरण पनि बनोस अन्तराष्ट्रीय बिमानस्थलमा पनि काम लागोस, शिक्षा स्वास्थ र रोजगारमा पनि काम लागोस । अनि हुण्डी र सुन तस्करको बिषयमा जनचेतना पनि फैलावोस, कतिपयले अन्जान मा पनि हुण्डी गरेको देखिन्छ | म गितामणी पाण्डे सधै हुण्डीको बिरोधमा छ र अन्यलाई पनि हुण्डी गर्नु हुदैन भन्ने बिषयमा सजक गराउन चाहन्छु। धन्यवाद !
(अध्यक्ष लुम्बिनी व्यल्फेयर सोसाईटी)
खोलाबाट गिट्टी बालुवा ढुंगा झिक्दा वडा कार्यालयबाट कर निर्धारण